Siirt Airport Terminal အဆောက်အအုံပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတင်ဒါကြောင့်ပြည်နယ်လေဆိပ်အာဏာပိုင်အဖွဲ့၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန (TCDD) ၏ 2019 / 575301 GCC ၏ကန့်သတ်တန်ဖိုးသည် 22.205.909,39 TL ဖြစ်ပြီးခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်မှာ 29.591.926,00 TL ဖြစ်သည်။ [ပို ... ]
အသစ်တစ်ခုကို Kart54 kiosks တွင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဤထူးခြားချက်အသစ်နှင့်ပြည့်စုံသောကတ်များကို ၀ ယ်ယူနိုင်ပါသည်။ Sakarya Metropolitan မြူနီစီပယ်၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဦး စီးဌာနအားဖြင့်မြို့၏ 10 ကွဲပြားခြားနားမှု [ပို ... ]
Karamanoğlu Mehmetbey တက္ကသိုလ်သည်ပညာရေးဝန်ထမ်းများကိုခန့်အပ်လိမ့်မည်။ Karamanoğlu Mehmetbey တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်ကိုအောက်ဖော်ပြပါဌာနများမှ 2547 သည်အဆင့်မြင့်ပညာရေးဥပဒေကိုသတ်မှတ်ပြီးစည်းမျဉ်း၏သက်ဆိုင်ရာဆောင်းပါးများနှင့်အညီဒြေဆရာ ၀ န်များကိုခန့်အပ်ခဲ့သည်။ [ပို ... ]
Bursa Courthouse လမ်းဆုံအတွက်ဖိအားပေးခံရ; တရားရုံးသစ်၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာစင်တာ၊ ပြပွဲစင်တာ၊ လက်ရှိရဲဌာနအဆောက်အအုံနှင့်ဆောက်လုပ်ဆဲGökmenအာကာသနှင့်လေကြောင်းစင်တာများတည်ရှိသည်။ [ပို ... ]
သယံဇာတအကျပ်အတည်းများနှင့်တိုက်ဆိုင်မှုများနှင့်အစီအစဉ်ကိုယူဆောင်လာခဲ့သည့်အစ္စတန်ဘူလ်မြေအောက်ရထားနောက်ပိုင်းတွင်နိုင်ငံအနှံ့ဖြစ်ပွားနေသောမက်ထရိုစီမံကိန်းများအတွက်မျက်စိကိုလှည့်ကြည့်ခဲ့သည်။ CHP Mersin မြူနီစီပယ် Bursa နှင့် Kocaeli မက်ထရိုအတွက်မက်ထရိုများအတွက်ချေးငွေရှာဖွေနေ [ပို ... ]
Konya မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး၏မြို့တော်ဝန် Ugur Ibrahim Altay သည် Konya ရှိသတင်းစာဆရာများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအစီအစဉ်အကဲဖြတ်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒေသဆိုင်ရာနှင့်အမျိုးသားစာနယ်ဇင်းအဖွဲ့အစည်းများမှကိုယ်စားလှယ်များနှင့် Konya Metropolitan Municipality မှမြို့တော်ဝန်Uğurİbrahim Altay [ပို ... ]
ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်များအတွက်Haydarpaşaရထားဘူတာအတွင်း; 2010 တွင်၊ Haydarpaşaမီးရထားဘူတာတွင်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းသည်ခေါင်မိုးပေါ် မီးလောင်၍ ပျက်စီးသွားသောကြောင့်အကြီးအကျယ်ပြီးစီးခဲ့သည်။ TRT သည်ပထမဆုံးအကြိမ်ဘူတာရုံအဆောက်အ ဦး ၏နောက်ဆုံးအခြေအနေဖြစ်သည် [ပို ... ]
Mustafa Kocaman, Kartepe မြူနီစီပယ်၏မြို့တော်ဝန်, 32 ၏အကြီးအကဲနှင့်အတူမြူနီစီပယ်၏အစည်းအဝေးခန်းမထဲမှာတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ မြို့တော်ဝန် Kocaman T Derbent တွင်တည်ဆောက်ရန်စီစဉ်ထားသောအဆိုပါ ropeway စီမံကိန်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဂရုစိုက်ပြီးလွဲချော်နေသောစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ [ပို ... ]
Bursa Uludag Cable Car ကြေးအချိန်ဇယားအလုပ်ချိန်နှင့်ကားပါကင်အခကြေးငွေ 2019; နှင်းလျှောစီး Bursa, ကေဘယ်လ်ကားများ၏တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးလိုင်းအမိန့်ရုပ်သိမ်းပြီ။ 29 အောက်တိုဘာ 1963 တွင်ဖွင့်လှစ်။ Bursa ၏မြို့သင်္ကေတတစ်ခု [ပို ... ]
E-စက်ဘီး: တူရကီစက်ဘီးစက်မှုလုပ်ငန်း၌ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းရင်ဆိုင်နေရသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် elektrikli pedal-assisted လျှပ်စစ်စက်ဘီး Ada ဟုလည်းလူသိများသော e-bike ကိုဝယ်လိုအားလျှင်မြန်စွာတိုးတက်နေသည်။ ဥရောပနိုင်ငံတွေ၏အဓိကပေးသွင်းအတွက်တူရကီအဘယ်ကြောင့် E-စက်ဘီး [ပို ... ]
ယာဉ်မောင်းအာရုံစူးစိုက်မှု .. ! Anadolu ကားလမ်း 5-20 ကိုဒီဇင်ဘာလတွင်ပိတ်မည်
ယာဉ်မောင်းအာရုံစူးစိုက်မှု .. ! Anatolian ကားလမ်း 5-20 ကိုဒီဇင်ဘာလတွင်ပိတ်လိမ့်မည်။ Izmit East Junction-Adapazari လမ်းဆုံအပိုင်းအခြားသည် Ankara ၏လမ်းကြောင်းရှိ Anatolian ကားလမ်း၏ 5-20 ဒီဇင်ဘာလဒီဇင်ဘာ 08.00-18.00 [ပို ... ]